8 I-15. I-Clef Two-Factor Ukuqinisekisa
10 I-19. Cursore I-Meta
Vakashela ku-intanethi: Sitemap XML I-Google
Sitemap XML I-Google i-plugin ebalulekile ye-SEO esisiza abakwa-web crawlers ukuthi baqonde isayithi lakho bese babhala amakhasi awo.
Vakashela ku-intanethi: SEO I-Yoast
I-Yoast SEO iyi-plugin ethandwayo engakusiza non è disponibile sulla pagina iniziale. Kuyasiza ukuthola izinkinga, ukhiqize ama-sitemaps, futhi unikeze izincomo ezingathuthukisa izikhundla zesayithi lakho.
I-15. I-Clef Two-Factor Ukuqinisekisa
Njenge-fail-safe, qiniseka ukuthi unezipele ezizokusiza ukuthi ululame ezinkingeni ezingalindelekile. Nge-UpdraftPlus, ungakha kalula noma uhlele izipele ezizenzakalelayo zokuphepha okungeziwe.
I-19. Cursore I-Meta
Amafomu we-Ninja ufaka umhleli wefomu lokudonsa upsonsa ekufakweni kwakho kwe-WordPress. I-plugin yomsebenzisi-friendly engakwazi ukukuqondisa zonke izinyathelo zendlela.
Nge-Breadcrumb NavXT, unganikeza izivakashi zakho izixhumanisi zokuhamba ukuze zizisize ukuthi ziphi. Uma ifakiwe, udinga ukunamathisela ikhodi elula ‘div’ lapho ufuna khona "umzila" bramiamo ukuvela.
Il plugin elula ikuvumela ukuthi udale futhi usebenzise amawijethi wesithombe kusayithi lakho. Lezi amawijethi ngokuzenzekelayo zivumelanisa futhi zishintshe ngisho namadivayisi eselula. Ungakwazi futhi ukwengeza isihloko, incazelo, kanye nesixhumanisi ukuze ubenze xaxa.
I-plugin ye-Calendar Calendar ivumela ukuthi udale amakhasi asebenzisana nemicimbi efana nokukhushulwa, amaqembu, nama-seminar. Vele usebenzise isikhombikubona esibonakalayo ukuze ugcwalise imininingwane bese ushicilela umcimbi wakho.
Nge-plugin ye-WordPress, zikhona amathuba angapheli su uhlobo lwamawebhusayithi ongawadala. Qinisekisa ukuthi uhlela phambili ukuze izingxenye zesayithi lakho zifake isipiliyoni esisodwa, esihlangene. Ungabhekisela kuwo lokhu okuthunyelwe kwamapulagi angaphezulu angasiza ukwandisa ukuguqulwa.